Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny birao fizahantany Seychelles miaraka amin'ireo mpandray anjara lehibe ao La Réunion
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny birao fizahantany Seychelles miaraka amin'ireo mpandray anjara lehibe ao La Réunion
Ny fanamafisana ny fifanarahana ifanaovana sy fihaonana amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'i Reunion no nifantohan'ny Lehiben'ny Executive Board ao amin'ny Seychelles (STB), Ramatoa Sherin Francis nandritra ny iraka ofisialy nataony tany amin'ny departemanta frantsay an'ny ranomasimbe Indianina nanomboka ny 21 Oktobra 2018 hatramin'ny 25 Oktobra 2018.
Sambany i Ramatoa Francis no niantso ny mpiara-miasa Reunion hatramin'ny nisian'ny solontena iray avy amin'ny STB; Rtoa Bernadette Honore, Senior Executive Executive dia napetraka tao tamin'ny 2015.
Nihaona tamin'Andriamatoa Jean Marc Grazzini, Tale jeneraly mpanampy amin'ny raharaha ara-barotra, Ramatoa Francis. Air Austral no hany orinasam-pitaterana an'habakabaka ao Reunion izay manana fifandraisana mivantana any Seychelles.
Hatramin'izao, Air Austral dia nanoratra fisondrotana 7 isan-jato amin'ny taha onenana amin'ny làlan'i Réunion mankany Seychelles raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny taona 2017. Nilaza Andriamatoa Grazzini fa ny mpandeha ivelany Reunion-Seychelles dia maneho orinasam-pandraharahana lehibe ho an'ny orinasa .
“Faly izahay fa misy vokany ny ezaky ny marketing miaraka amin'ny air austral. Zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny tsena izay ahafahantsika mitazona na manatsara ny fahita matetika amin'ny sidina mivantana aza, ”hoy Ramatoa Francis
Manondro ny fiakaran'ny tahan'ny tahan'ny zotram-piaramanidina, nanamafy ny hanohy hiasa amin'ny zotra Seychelles ny Air Austral.
Taorian'ny fihaonany tamin'ny Air Austral, Ramatoa Francis dia nihaona tamin'Andriamatoa Gerard Argien, ny talen'ny Reunion Tourisme Federation (FRT), ary ny ekipany.
Nandritra izay taona lasa izay, ny STB sy ny FRT dia namorona fifanarahana fifanakalozana fifanarahana izay nandehanan'ny mpiasa efatra avy ao amin'ny biraon'ny fizahantany Seychelles nankany Reunion, nahazo tombony tamin'ny fanatobiana matihanina.
Ao anatin'io fandaharana io ihany, mpiasa efatra an'ny FRT no nanao dia nankany Seychelles tropikaly. Ny roa tonta dia afaka mizara sy mifanakalo fahaizana amin'ny lafiny samihafa amin'ny andraikiny. Ohatra iray amin'izany ny fitantanana ny fiantsoana sambo fitsangantsanganana rehefa miantso ao amin'ny seranana izy ireo.
Hita fa mahasoa ho an'ny roa tonta, FRT dia naneho ny fahafaham-pony tamin'ity programa fifanakalozana ity.
Amin'ny anarany, Ramatoa Francis dia nanome toky fa hanohana hatrany ny programa fifanakalozana ny STB. Ny birao fizahantany dia mamporisika sy mampiroborobo ny fampandrosoana matihanina amin'ny faritra sy sampana hafa ao anatin'ny STB sy ny Departemantan'ny fizahantany.
“Manantena ny fiaraha-miasa iray taona miaraka amin'ny FRT aho. Hotazominay hatrany ny fifanakalozana fa amin'ity indray mitoraka ity dia mifantoka amin'ny faritra hafa izay ahafahan'ny mpiasanay mianatra avy amin'ireo namantsika ao amin'ilay faritra. Ny fifanakalozana dia fampandrosoana matihanina tena tsara ho an'ny mpiasa, "hoy Ramatoa Francis.
Manaraka ny fandaharam-potoanany dia ny fihaonana tamin'Andriamatoa Stephan Ulliac, filoha lefitra vonjimaika an'ny Ile de la Réunion Tourisme (IRT), mitovy amin'ny STB ny nosy. Nanatrika teo koa Ramatoa Linda Futhazar, izay manara-maso ny tsenan'ny Ranomasimbe Indianina ao amin'ny IRT.
Ny fifanarahana ifanaovana dia misy eo amin'ireo birao fizahan-tany roa, manohana ny hetsika marketing an'ny STB eny an-tsena. Naneho ny fahafaham-pony tamin'ny fanohanan'ny IRT Ramatoa Francis ary nifanaraka ny roa tonta hanohy ny fiaraha-miasa, amin'ny fametahana ireo hetsika ara-barotra mahazatra ho avy.
Nanararaotra io fotoana io Ramatoa Francis dia niantso fitsidihana ara-pomba fanajana ny Consul Honorary of Seychelles any Reunion, Andriamatoa Jean Claude Pech, izay niresahan'izy roa ireo ny iraka ataon'ny STB any La Réunion. Voaresaka ihany koa ireo hetsika samihafa hampiharina mba hahitana an'i Seychelles eny an-tsena.
Ny Lehiben'ny Executive STB Ramatoa Francis dia namarana ny fitsidihany tany La Réunion tamin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety avy any Le Quotidien, Exclusif Reunion ary RTL hanomezana vaovao farany ny iraka nataony tany La Réunion.
Efitra fandraisam-bahiny banga mitentina an'arivony tapitrisa Karaiba
Filoham-pirenena vaovao ao amin'ny UNWTO Executive Council